Oromoo: Waan keessa dabarre gaariis ta’u hamaa wal yaadachiisuun barbaachisaadha!! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOromoo: Waan keessa dabarre gaariis ta’u hamaa wal yaadachiisuun barbaachisaadha!!
Waraanni Abiy Maqaa ABOn Qonna bulaa Oromoo akkanatti Fixaa jira. Nuti Ajanda Jaraa hafarsiina… Qabsoo ofumaaf laaffisu jirtani beekaa
Godinaa horro gudduruu onaa #Amuruu gandaa #Dangajaa jedhamuutti waraanni #g7 jette of waamtuu guyyaa har’a jechuun #dec_15_2020 ganamaa sa’a lama irraa jalqabee hangaa ammatti dhukkasa uummatatti banun qe’eef qabeenyaa isaarraa oromoo buqisaani jiru. Looniif bushayee Kara agamsaan oofanii gara abbayitti naqa jiru. Mana hedduu gubaniru. Kan danda’an ammoo saammaani jiru.
Haalli Amma naannnoo sun keessa jiru kan uummata naannoo sanaf yaaddo ta’eef humnii adda amaraaf g7 humnii itti dabbalama jiraachuun hawwasa yaaddo keessa galchee jira.
Mirgii oromoo qawween kabajama kan jennuuf oromoo jalqabarrayuu afaan qawween akka cabee wan beeknufidha.
Ammas fashinin qawwee hin darbine . Yoo lolaaf of qophesite malee dhabamuuf jirta yaa oromoo.
Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaatti, miseensi gameessi poolisii Oromiyaa
Abdiisaa Birruu kan jedhamu, WBO hin lolu jedhee waan dideef hidhamee torban lamaaf reebamaa turuun miidhamni ulfaataa waan irra gaheef mana keessatti akka hin duune jedhanii guyyaa kaleessaa gadi lakkisan.
Poolisoonni idilee fi humni addaa hedduutu WBOn lammii keenya waan taheef hin lollu waan jedhaniif qofa torban sadii oliif mooraa waraanaa keessatti hidhamuun reebamaa jira.
Akkuma maqaa arganneen isin biraan geenya.
Duula golgaa “ABO balleessuu” jedhuun karoora Oromummaa balleessuu ilmni habashaa Abiy labse tokkummaa Oromoon fashaleessuun dirqama!! Seenaa yeroo dhiyoorraa , akkaata itti Abiy fi Lammaan Oromoo gowwoomsan wal haa yaadachiifnu!
Waan keessa dabarre gaariis ta’u hamaa wal yaadachiisuun barbaachisaadha . Irraa baratama waan ta’eef. Adeemsa gara fuulduraaf nama gargaara waan ta’eef.
Har’a seenaa bara fagoo wal hin yaadachiifnu. Seena gabaabduu #waggaa_sadii as wal yaadachiifna. Seena yeroo dhiyoo fi barumsa baay’ee baay’e bareedduu irraa barachuu dandeenyudha!
Dubbisaatii Oromoo maraaf qooda!
Bara 2018 bara ODPn fira fakkaattee foon keenya nyaatte irraan ka’a. Bara 2018 yeroo OPDO/ODPn sababa #WBO_hiikachiisuu qabdaan jechuun ABO irratti duulte sana yaadadha. Bara sana ololli OPDOn gochaa turte nama baay’eef lola ABO fi OPDO itti fakkaachaa ture. Namoonni gariin lola Oromoo fi Oromooti jedhanii gaddaa turan. Lolli suni lola “dhaabota” Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jirudha jedhanii baay’ee gaddaa turan.
Yeroo sanatti Oromoon gariin OPDO irra goruun ABO/WBOtti duulaa turan. Olola TV fi FBn ABO/WBO balaaleffachaa turan. Oromoon bicuun dammaqina siyaasaa qaban garuu dhugaa jiru waan hubatanii fi seenaa darbe waan beekaniif ABO/WBO irra goranii OPDOtti duulan. Wareegama ulfaataas ABO/WBO waliin kaffalan, kaffalaas jiru.
Dhugaa jirtu garuu namni qalbii qabu ni hubata. Ammas dhugaa jirtu namni dhugaa barbaadu ni hubata waan ta’eef dhugaa jiru irra deebiin barreessuufi ammaas garamitti akka deema jirru walitti himuun dirqama waan ta’eef seena yeroo gabaabdu (bara 2018 asitti ) keessa dabarsine wal yaadachiisuun dirqamadha.
Bara 2018 yeroo OPDOn “ABO/WBOn qawwee hiikkachuu qaba “jettee afaan bantu sana Oromoof galuu dide malee dhimmichi WBO qawwee hiikkachiisuuf hin turre. Dhimmichi jalqabuma diddaa ABOn haa fashala’uu malee, akkuma OPDOn gaafatte sanatti otoo ABOn waraana of harkaa qabu ,WBO ,qawwee hiikkachiiseera ta’e wal diddaan ABO fi OPDO furmaata hin argatu ture.
Lammaffaa ammoo Oromoof galuu dide malee “WBOn qawwee haa hiikkatu ” jechuun OPDO, WBO qofa jechuu ishee akka hin taane Oromoon beekamuu qaba ture. Otoo WBOn tole jedhee qawwee hiikkateera ta’ee OPDOn itti fuftee #horsiifatee_bulaa_Oromoo qawwee hiikkachiisuuf turte. Itti fufuunis guutummaa Oromoo irraa qawwee hiikkachuuf ture. Kuni diddaa ABO/WBOn fashalaa’ee harkatti kufe.
OPDOn itti fufuun godinoota Oromiyaa WBOn keessa socho’u kanneen akka #kibbaa fi #Lixa Oromiyaa kutaa Oromiyaa kaan irraa adda baasuun #duguuggaa_sanyii waggaa lamaaf oliif gaggeessite, ammas itti jirti. Bara OPDOn Oromoo kibbaa fi lixa Oromiyaa addatti qooddee duguuggaa sanyii raawwachaa turtetti, keessaattuu bara 2018, Oromoon kutaan hafe #dirmachuufii_dhiisee_OPDO_waliin dhaabbatee afaan darbaa dubbachaa ture.
Oromoon yeroo sanatti OPDO waliin dhaabbatee ABO/WBOtti afaan banaa ture, Oromoon yeroo sanatti OPDO waliin hiriiree Walloo, Wallagaa , Gujii fi Booranatti afaan banaa ture ibbidda Waallo, Wallaggaa , Gujii fi Boorana gubeen akka #dabareen_gubatu hin barre ture. Garuu sabboontonni ilmaan Oromoo, WBOn , ABOn akka Oromoon waliif dirmatu iyyaa turan.
Ibiddi Boorana, Gujii ,Walloo fi Wallagga yeroo sanatti gubaa ture guutummaa Oromiyaa wal gahuuf jira waan ta’ee Oromoon tokkumman ka’ee waliif dirmachuu qaba jedhamee iyyamaa turus Oromotti dhugaa hin fakkaanne. Yeroo Wallaggi , Walloo fi Gujiin dhumaa turetti oromoon kutaan kaan #sirbaa ture, kaan #mana_badhaafamaa ture, kaan #lafa_mana_jireenyaa badhaafamaa ture, kaan ammoo #maallaqa guddaa badhaafamaa ture.
Garuu dhugaan qal’attus hin cittu akkuma jedhamu ibiddi Walloo, Walalggaa , Gujii fi Booran gubaa turte har’a guutummaa Oromiyaa bobeessaa jirti, har’a #guutummaa #Oromiyaa keessatti duguuggaa sanyiitu gaggeeffamaa jira. Boo’ichi kaleessa kibbaa, kaabaa fi Dhiha Oromiyaa qofaa keessa ture waggaa tokkoo as guutummaa Oromiyaa keessa bo’ichatu jira.
Bara 2018tti OPDOn xiyyeeffannoon ishee ABO/WBO qofaa fakkeessitee kaate. Yeroo sanatti gareen garaa garaa, #murni garaa garaa fi Miidiyaan maallaqa Oromoon ijaaramee, maqaa Oromoon of waamu #OMN, daarekteerrii OMN #Jawar dabalatee OPDO jala hudduu raasuun ABO/WBOtti duulaa turan .
Yeroo sanatti dhaabonni polotikaa Oromoo kanneen walaba ta’anii Oromoof qabsaa’an summii OPDOn
iddimuu jalaa hin ba’an waan ta’eef kaayyoo fi akeeka #biyya_Oromiyaa jalatti deebi’uun tokkummaan dhaabachuu qabu, diinas Ofirraa qolachuu qabu jennee yeroo iyyinutti gurra nu dhaga’u dhabne. Gariin dhaabota Oromoo “nuhi #Itoophiyaa #dimokiraatessuuf qabsoofna waan ta’eef OPDOn akka kana duraa nutti hin buutu, akka miseensota ABO hiitu nu hin hiitu ” jechaa turan. Kana waan abdataniifis ABO waliin kaayyoo #mirga_hiree_murteeffanna Oromoo fudhachuu dadhabuu isaanirraa kan ka’e ABO waliin tokkomuu dadhabani. Garuu akkuma miseensonni ABO mana hidhaatti guuraman miseensonni dhaabota garaa garaas mana hidhaatti guuramaniiru. Waajjiraaleen dhaabota biroo ,keessaattu kan KFO, akkuma kan ABO bakka hundaatti cufameera.
Waan Oromoon jaallatu hunda balleessuuf dura ABO balleessuu qabna leegaasiin jettu suni bara WAYYAANEE kan turtedha. Har’as buchuulloonni Mallas guddise kanneen akka Abiy itti fayyadamaa jiru. Dhimmichi garuu ABO balleessuu isa jedhuun dhaabbata miti. Oromoo fi Oromummaa balleessuun goolabama. Kaleessa yeroo ABO/WBOtti duulamu sana otoo Oromoon guutummaa Oromiyaa keessaa jiru tokkummaan ABO/WBO waliin hiriireera ta’ee rakkoo amma keessa jirru kana keessa hin seennu ture. Kaleessa yeroo OPDOn ABOtti duultu sana dhaabonni polotikaa Oromoo kaan tokkummaan otoo ABO waliin hiriiraniiru ta’e rakkoo amma jirru kana keessaa hin seennu ture. Keessattuu KFOn ABO waliin dhaabchuu maal akka isa dhorkaa tures inuma beekna.
Har’a maaltu karaa OPDO/Bilxiginnaa yaadamaa jira? Maaltu odeeffamaa jira? Oromoon jecha ilmaan Wayyaanee kanneen akka Abiy irraa maal hubata? Seenaan armaan olii maal nu barsiisa? Gabaabumatti jechi Abiy Ahimed yeroo darbe Keeniyaatti dubbate suni maal nuu akeeka? Dhuguma Abiy ABO balleessuu jechuun isaa “dhaaba ABO” balleessuu moo Oromummaa balleessudha?
Deebiin gaaffii kanaa ifadha. Abiy ABO balleessina jedhee miti kan inni #daboo_kadhachaa jiru. ABO gooftaan Abiy Mallas Zeenawwiin balleessuu akka hin dandeenye Abiy caala namni kamuu hin beeku. ABO gargaarsa/daboo biyyoota gaanfa Afrikaan hin banne sana har’a erga
#uummata_ofii_keessaa_seenee booda balleessuu akka hin dandeenye Abiy ni beeka.
ABOnis nama dhuunfaa tokko qofaa akka hin taane, yookiin garee muraasa qofaa akka hin taane Abiy sirriitti beeka. Oromoon kana beeku garuu muraasadha. Abiy tapha ABO balleessuu otoo hin taane tapha biraa irra jira. Kanaaf ABO balleessuun akka hin danda’amne sirriitti beeka . Garuu Abiy , ABO balleessuuf yeroo daboo kadhatu kan inni jechaa ture Oromummaa gaanfa Afrikaatti daraaraa jiru balleessuu qabnaa jechaa jira. Oromummaa balleessuuf ammoo qabata ykn taappeellaa ABO oromootti maxxansinee Oromoota sabboonummaa qaban lafarraa duuguugna jechaa jira. Kuni Oromoof galuu qaba. Keessaattu Oromoon keeniyaa keessaas waan jiraatuuf akka keeniyaan dhimma kana Itoophiyaa gargaartu boo’ee kadhachaa jira!
Kana waan ta’ee Oromoon guutumma gaanfa Afrikaa keessa jiru wal ta’ee ABO waliin hiriiruun shira Abiy Ahimed fashaleessuu qaba. Kanas Oromoon ammuma irraa eegale hin raawwatu taanaan akkuma bara 2018 sana wal gaareffachaa ture dhuma irratti wal qabatee boolla Abiy qotaa jirutti naqamuuf akka jiru hin dagatiina!
Anis ABO dha!
Somalia deploys soldiers to Mandera border hours after cutting diplomatic ties with Kenya Read more: https://www.tuko.co.ke/396697-somalia-deploys-soldiers-mandera-border-hours-cutting-diplomatic-ties-kenya.
Benshangul Gumuz Prosperity Party – ብልፅግና